new design outdoor rattan sofa cum bed, Modern Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Supporter Mapeji fenicha Fenicha Yemazuva ano dhizaini nyowani yekunze rattan sofa cum mubhedha
dhizaini nyowani yekunze rattan sofa cum mubhedha
1 CubicCenti US $550.00/ CubicCenti
;Round patio sun lounger bed wicker rattan sofa furniture
1. Aluminium fchitima
2. Rattan: yakadzoreredzwa PE Rattan, yakasimba uye UV inopokana
3. Yemvura isina mucheka machira
Inowanikwa mukati Nanlang Maindasitiri Nzvimbo, TANFLY Madziro Co, Ltd chigadzirwa chepamusoro uye mutengesi uyo ane zvakawanda kupfuura 5 ruzivo, The company has gathered a group of talents both in R&D, manufacturing and in marketing of rattan sofa, modular sofa, yekudyara set, chair netafura, bar sito, imba yekutandarira, hot tub fenicha, swing chair, kunze kwamburera zvigadzirwa.TANFLY dedicates itself to providing “Perfect Rattan IfichaSolutions” to consumers yepasirese.
Tenda kune yedu kambani, beacuse isu ticharamba tichiita zvakanakisa:
Chikero: Makore 4 'ruzivo, vanopfuura zana vashandi uye 100square mita fekitori
Mhando: Yakapfuura SGS yakatenderwa.
Kugona: 300 * 40HQ containers yemidziyo kukwanisa kwegore.
Dhirivhari: Inoshanda OA kuraira system inova nechokwadi chekutakura mazuva 15-25.
Mushure mekutengesa: Zvese zvichemo zvinobata mukati memazuva 1-3.
Imwe yekumira rattan fenicha mhinduro: Imwe-yekumira gadziriso, rattan sofa, modular sofa, yekudyara set, chigaro netafura, bar chigaro, pekugara, inopisa tub fenicha, ekunze amburera zvigadzirwa, TANFLY inopa yakakwana rattan fenicha mhinduro.
Sei usarudze kunze wicker?
Kunze wicker yakachinja kupfuura mamwe marudzi ese fenicha yakajairika mumakore gumi apfuura.
Zvese zvinosanganisirwa muchiitiko ichi zvakagadziriswa kuti zvipe anotaridzika chaizvo uye yakakwirira kwazvo nhanho yekureba. Kunaya, chando, siketi kana kupenya, resin kunze wicker inokwanisa kubata chero izvo Amai Zvisikwa zvavanoda kukanda pairi.
Uchishandisa only yakakwirira mhando dzemidziyo, yedu seti inopesana nekupera uye isiri-yehupfu. Ruoko rwedu rwakakoshwa
inopa yekuchengetedza yakasununguka chitarisiko chinoramba kupatsanura uye chipping. Chiyero chega chega chakarukwa pamusoro a yakasimba aluminium frame iyo inopa yakakwana kugadzikana uye hupenyu hwakareba.
1.100% ruoko-yakarukwa nevashandi vane hunyanzvi.
2. Ose ari maviri anokodzera nzvimbo yemukati & yekunze.
3. Yakanaka UV radiation, yakanyanya kupisa kupisa, kudzivirira mamiriro ekunze, ruvara rwusina mafashoni.
4. ine mvura inodzosera yakagadzikana cushions sarudzo.
5. PE rattan & pamutsago & mapiro penda sezvaunoda.
6. Yakakwirira mhando nharaunda-hushamwari zvigadzirwa nemakwikwi akawanda mutengo.
7. Zvese zvigadzirwa zvinopa angangoita makore maviri garandi.
8. OEM kana ODM inowanikwa.
Yakaomeswa waranti: 24 months (yakavezwa kubva pazuva rekugadzira kubva kuTANFLY) yezvinhu zvese zvemattan fenicha. Mukati meiyi nguva yenguva, isu tinogona kutsiva iyo fenicha yemahara kana matambudziko emhando yechigadzirwa asingakwanise kugadziriswa nyore. (Nezve iyo kukuvadzwa kunokonzerwa nevanhu kana zvinhu zvisingadzivisiki, mutengo wekugadziriswa uye zvinhu zvacho zvave kubhadharwa.
Zvese zvichemo zvichagadziriswa mukati memazuva 1-3. Isu tinotenda kuti kubata kunogunun'una munguva uye nzira dzinoshanda dzinopa rutsigiro rwakasimba kune vatinoshanda navo. Yedu profionalsales timu yakasimba kutsigira kune vatinoshanda navo zvachose.
PE rattan ruvara iripo: dema, grey, grey, sirivha, chena Ruvara nezvimwe zvingasarudzika.
Mucheki weCushion unowanikwa: aniseed, turquoise, raspberry, mastic, chokoreti, emerald, anthracite, chena, nezvimwe.
Rattan ruvara uye cushion ruvara runogona kuve kusarudza.
fenicha Fenicha Yemazuva ano
sofa cum mubhedha